Kukhangiswe ngemikhiqizo yemfashini yendawo
Sponsored Content | June 29, 2021
UMBUKISO wemfashini obubanjelwe esitolo iDurban Fashion Fair (DFF) Emporium ngomhla ka-25 no-26 Juni eMlazi Mega City ube yimpumelelo. Lo mbukiso ukhangise ngemfashini yesimanje etholakala kulesi sitolo.
Lo mcimbi ubusingathwe wuphiko lokweseka amabhizinisi, iBusiness Support, Tourism, Markets and Agri-Business Unit kuMasipala weTheku, ngenhloso yokukhuthaza umkhankaso wokuthengwa kwemikhiqizo yalapha ekhaya. Abathengi bakhuthazwe ukuba bavakashele lesi sitolo beseke imboni yemfashini yendawo. Kulo mbukiso kube nemincintiswano lapho abaphume phambili bezihlomulele ngamavawusha eDFF Emporium.
Abasiki bengqephu beDFF Emporium babonge uMasipala weTheku ngokuhlela lo mbukiso obavulele ithuba lokuba bahlanganyele nabantu abangase babe ngamakhasimende abo.
USandile Mngadi weDuke Clothe Your Soul Designs uthe: “Ngiyabonga ngokwesekwa esilokhu sikuthole njalo kwiDolobha. Kusukela ekusicathuliseni kule mboni kuye ekuhleleni imicimbi enjengalona wanamhlanje. Kube yithuba elihle lokuba sizethule kumakhasimende.”
ULungelo Maphanga wePigeon Peacful Designs uthe ujabule ngokuthola ithuba lokukhangisa ngomsebenzi wakhe emphakathini nakwabezindaba. “Umcimbi wanamhlanje uzosisiza senyuse isibalo samakhasimende ethu.”
UZodwa Makhado ongumsunguli weZolution Fashion uthe kumjabulisile ukuba iDolobha lisingathe lo mcimbi ogcizelele ukubaluleka komkhankaso wokuthengwa kwemikhiqizo yasekhaya.
IPhini leNhloko yokuthuthukiswa kwamabhizinisi, iSmall, Medium and Micro Enterprise Development, uNonku Mthembu uthe umbukiso uyifezile inhloso yabo yokweseka imboni yezemfashini yendawo.
UMthembu uthe uhlelo lweDolobha lokuthuthukisa ezemfashini lugubha iminyaka engu-10 yokuvumbulula ithalente nokuhlinzeka ngamathuba okufundela umsebenzi.
“Sinezinhlelo eziningi ngale mboni njengoba inhloso yethu kuwukwenza iTheku libe yisizinda semfashini e-Afrika yonke.”
Ukweseka abasiki bengqephu bendawo noma ukuthenga eDFF Emporium usebenzisa i-inthanethi, vakashela ku www.dffemporium.co.za.
Ungakwazi nokushaya ucingo noma uthumele umlayezo kuWhatsApp ku-072 968 2259.
Lesi sitolo sidiliva kuzona zonke izindawo zakuleli ngoR100.